Ibex 35 ngaphambi komceli mngeni wamanqaku ayi-9800 | Ezezimali
Inyanga kaJanuwari ibilungile kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i-Ibex 35, ebuye yaqala kwakhona umjelo we-bullish ubuncinci kwixesha elifutshane. Amandla ayo aphuhlisiwe ukusuka kumanqanaba amanqaku angama-8500 kwaye yonke into ijongeka njenge Rally yenkomo Iiholide zeKrisimesi zize nokulibaziseka okuthile, kodwa ngokuqinisekileyo ngaphandle kokuqina. Apho onke amaxabiso kwimarike yaseSpain exabisa kakhulu, kwezinye iimeko ngaphezulu kwe-20%.
Akukho mntu ucinga ukuba ubulungisa buqale kulo nyaka ngale nto amandla ukunyuka. Akumangalisi ukuba uninzi lwabatyali mali abancinci nabaphakathi bebengekho kwiimarike zemali ngeenjongo zokuthenga ngexabiso eliphantsi kakhulu kunasekupheleni konyaka ophelileyo. Le ntshukumo, ke, yothuse wonke umntu kwaye inokuba sele icothisile ukungena kwiimarike zemali ngeli xesha.
Ngokomgaqo yonke into ibonakala ngathi imalunga nokuxhamla, kodwa ngamandla amakhulu kwaye isenokuba nendlela ende enyukayo. Nangona kunjalo, ukuba ingaphezulu kwamanqanaba ayo angama-9800 amanqaku, inokuthetha utshintsho kwimeko yesiqhelo kunye nexesha eliphakathi. Ngaphandle kwezilungiso ezisengqiqweni onokuthi ube unazo apha endleleni. Iya kuba sesinye sezitshixo i-Ibex 35 eya kusinika ukuba sithathe isicwangciso esinye okanye esinye sotyalo-mali, ngaphaya kwezinye izinto zobugcisa ezinokuphuhliswa sisalathiso sesitokhwe.
1 Ibex 35: ukunyuka kwamaxabiso
2 Ubudlelwane phakathi kwe-USA ne China
3 Uqikelelo kwintengiso yesizwe
4 Ukuhlaziya ezantsi kwe-Ibex 35
5 Ingozi yomgibe wokunyusa
6 Ukunciphisa izikhundla kwimarike yemasheya
Ibex 35: ukunyuka kwamaxabiso
Iziphumo zale ntshukumo kwii-equities zesizwe zikhawuleze. Ngombulelo kumaxabiso afanelekileyo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba iinkampani ezidwelisiweyo kwi icandelo lombane Babekwe kwindawo yokunyuka simahla. Oko kukuthi, abasenayo inkcaso phambili kwaye ke amandla abo okuhlaziya okwangoku aphezulu kakhulu. Njengakwimeko ethile ye-Endesa okanye i-Enagás, zezinye zeendlela zokubheja zalo nyaka yinxalenye enkulu yabahlalutyi bezemali. Ngaphandle kwento yokuba sele befumene umvuzo omninzi kunyaka ophelileyo.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba i-Ibex 35 yavela kwimeko yobuthathaka obugqithisileyo kwaye yayinokuzibeka phantsi kwamanqaku angama-8500 XNUMX. Utshintsho olukhulu kakhulu kwizabelo zamazwe ethu kwaye oko kubambe inxenye entle yabatyali mali abancinci nabaphakathi ngonyawo olutshintshileyo. Ngoku kuhleli ukubona ukuba isalathiso esikhethiweyo sama-equities kazwelonke sinokufikelela phi. Kwimeko nayiphi na into, yonke into ibonakala ibonisa ukuba kunjalo kuya kubakho uhambo oluphezulu ngesemester yokuqala yonyaka. Apho inokuba khona kumanqanaba aphakathi kwamanqanaba angama-9500 kunye nama-9800 amanqaku.
Ubudlelwane phakathi kwe-USA ne China
Esinye sezizathu zokuchaza le ntshukumo inyukayo ingalindelekanga yindlela ukuphuculwa kobudlelwane kwezorhwebo phakathi kwala magunya mabini ezoqoqosho. Ukuya kwinqanaba lokuba isivumelwano esinemveliso kakhulu sinokufikelelwa kwiinyanga ezizayo. Into engathandabuzekiyo eyomeleze ngamandla kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela. Kwelinye icala, asinakulibala ukuba kukho ezinye izinto ezikhokelele ukulingana ekuthengeni izikhundla.
Ngale ndlela, kubalulekile ukuqaqambisa into yokuba kwezi veki zidlulileyo kuye kwakho uhlobo lwentengiselwano ethe-ethe phakathi kwe-United States ne China kwimfazwe yorhwebo ezibandakanya ezi colossi zoqoqosho lwamanye amazwe. Kuba kuyamangalisa kakhulu ukuba urhulumente waseWashington uyihlehlisile ukunyuka kwerhafu kwizigidi ezingama-200.000 zeerandi. Ngelixa ngokuchaseneyo, iBeijing iyavuma ukuthenga "isixa esikhulu" seemveliso zaseMntla Melika. Kungenjalo, kuyo nayiphi na imeko, enye imfazwe yengqondo iqhutywa ngala mazwe mabini abalulekileyo emhlabeni.
Uqikelelo kwintengiso yesizwe
Kwindlela eyahlukileyo, evela kwi-Bankinter yophando kunye nohlalutyo basebenzise amathuba amaninzi apho isalathiso esikhethiweyo semarike yaseSpain sinokuthi siye kulo nyaka. Ngolu qikelelo, “kwimeko yethu yesiseko, sihlaziye ixabiso lethu ekujoliswe kulo ukuya kumanqaku ayi-10.712 (ukusuka kumanqaku ayi-11.781 aqikelelwe ngoJuni). Olu hlengahlengiso luvela kwezi meko zilandelayo ezikhomba kweli qela lezemali.
Un ukunyuka okuncinci kwi-IRR ye-bond yeminyaka eli-10 Ngexesha lekota ezintathu. Ngokukodwa, isivuno sebhondi sidlulele kwi-1,49% ukusuka kwi-1,44% ngaphambili.
El Uqikelelo lwe-EPS lusikiwe Imvumelwano ye-2019 (-0,6% ukuya kwi-827,4 euro) ngokuthelekiswa noko kwaqikelelwa ngoJuni.
Omnye ipremiyamu ephezulu yomngcipheko (6,2%, xa kuthelekiswa ne-5,35% ngaphambili) ebandakanya ukuphulukana namandla esiqikelela ukuba uqoqosho lwaseSpain kwikota ezizayo.
Uhlengahlengiso olusezantsi lwemodeli yokuxabisa ezantsi.
Ukuhlaziya ezantsi kwe-Ibex 35
Ngaphantsi kwezi meko, uhlalutyo lweli ziko lemali lubonisa ukuba kufuneka sijonge ukusika -10% ukulungiselela ikamva ukuhlaziywa okuphantsi kwezibonelelo ezisetyenziswe kwiimodeli zokuxabisa zeenkampani ze-Ibex. “Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba iimodeli phezulu ukuya ezantsi (Injongo ye-PER, phakathi kwabanye) ibandakanya utshintsho kumathemba okukhula kwangoko ngelixa abahlalutyi abancinci (uhlalutyo Umzantsi phezulu“bathande ukusabela msinyane” cacisa abahlalutyi bezabelo kweli qela lezemali.
Oku kungaphaya okanye kungaphantsi koko kuthethwa ngabanye abahlalutyi abaziingcali kwiimarike zezabelo, becebisa ukuba uhlaziyo olusezantsi ngokwembono yentengiso yesitokhwe kuzwelonke kuya kuba yinto eqhelekileyo. Into ethi ekugqibeleni ingabi gwenxa kwaphela ukuba umntu uthathela ingqalelo isikhokelo esasithathwa ziimarike zamasheya zamanye amazwe ekupheleni konyaka ophelileyo. Apho i-Ibex 35 isondele kwinqanaba le Amanqaku e-8.500. Ukusukela i-9.200 ekule mizuzu ngqo.
Ingozi yomgibe wokunyusa
Ngayiphi na imeko, kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuba oku kunyuka kwenzekayo kwiimarike zezabelo kwihlabathi liphela kunokuba ngumgibe. Ayothusi into yokuba ibangela inxenye entle yabatyali mali abancinci nabaphakathi ukuba bangene kwiimarike zezemali ngaphambi kwemvakalelo yakhe ngokubanzi. Ngomngcipheko ocacileyo wokubanjwa kwizikhundla zabo. Oko kukuthi ngamaxabiso acatshulweyo kude kakhulu nexabiso lokuthenga. Le yinto eyenzekileyo ngokwembali kwaye inokudala ngaphezulu kwesinye seengxaki zakho ukusukela ngoku.
Ewe, awungekhe ulibale ukuba imeko esisiseko kwiimarike ze-equity isesezantsi kwaye le yinto engenakuthandabuzwa ngeli xesha. Ubuncinci de amanqanaba enkxaso yokubaluleka okuthile engagqithiyo kwaye kwindawo yokuqala ibekwe kwi Ummandla wamanqaku angama-9.800. Ngale ndlela, usemde umgama ekufuneka uhambe ngawo kwaye akunakulindeleka ukuba ezi njongo zifezekiswe kwixesha elifutshane ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwimeko nayiphi na into, ngumngcipheko omele ucinge ukuba injongo yakho ngeli xesha kukubuyela ekuthatheni izikhundla kwimarike yemasheya.
Ukunciphisa izikhundla kwimarike yemasheya
Ngokuchasene noko, oku kunyuka kungasetyenziselwa ukunciphisa isikhundla sakho kwiimarike zezabelo. Ke Inxalenye okanye iyonke kuxhomekeke kwisicwangciso sotyalo-mali oza kusisebenzisa kulo nyaka. Ukuthatha ithuba leepikhi kumaxabiso ezabelo zeenkampani ezidwelisiweyo. Ukuze ngale ndlela, iintshukumo zakho zinokulungiswa ngokuqinisekileyo xa kujongano lokungazinzi kwiimarike zezemali kwiintsuku ezizayo okanye kwiinyanga ezizayo. Isicwangciso esiliqili sokuzikhusela esijolise ekugcineni imali yakho ngaphezulu kwezinye izinto zobugcisa.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba kungcono Yonwabela iinzuzo ezinkulu eveliswe ngaphambi kokuba ulahle ii-euro ezininzi apha endleleni. Kunyaka obonakala unzima kakhulu kwezi asethi zemali. Apho nangaliphi na ixesha ungaqala khona ukunyakaza kwe-bearish kwiimarike zamashishini zamazwe ngamazwe. Ngamandla anokumangalisa indawo elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ungalibali ukuba ufuna ukubonelela ngokhuseleko olukhulu kwimisebenzi yakho kwintengiso yesitokhwe.
Okokugqibela, akufuneki ulibale ukuba ezi nyanga zokuqala zonyaka zihlala zilungile kakhulu kwimidla yeemarike zezabelo. Ngokwesintu bekusoloko kunje kwaye kulo nyaka bekungekho ngaphandle. Akunakulityalwa ukuba i-Ibex 35 yavela kwimeko yobuthathaka obugqithisileyo kwaye yayisesimweni sokuzibeka phantsi kwamanqaku angama-8500 XNUMX. Utshintsho olukhulu kakhulu kwizabelo zamazwe ethu kwaye oko kubambe inxenye entle yabatyali mali abancinci nabaphakathi ngonyawo olutshintshileyo. Ngoku kuya kuhlala kubonakala ukuba isalathiso esikhethiweyo sama-equities kazwelonke sinokufikelela phi. Ungalibali ukuba ufuna ukubonelela ngokhuseleko olukhulu kwimisebenzi yakho kwintengiso yesitokhwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ibex 35 ngaphambi komceli mngeni wamanqaku angama-9800